Soo dejisan Avast Internet Security 20.5.5410 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudAvast Internet Security
Bogga rasmiga ah: Avast Internet Security
Avast Internet Security – suurtogal ah in la ilaaliyo kombiyuutarka iyo waxqabadka internetka ee user. Software wuxuu kormeerayaa dhammaan macluumaadka soo socda iyo kuwa soo socda oo ka difaacaya ka hortagga goobaha DNS si looga hortago in dadka isticmaala soo celinta bogagga been-abuurka ah. Nabadgelyada Internetka ee Avast wuxuu taageertaa taranka nidaamka caqli-celinta taas oo hubinaysa gobolka kombuyuutarku oo wuxuu ku ogaanayaa dhammaan dhibaatada ammaanka, asturnaanta iyo waxqabadka. Amniga Internetka ee Avast wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hubisid software-ka iyo shaandhada shakiga leh ee sanduuqa sanduuqa leh oo aan khatar ku ahayn kombuyuutarkaaga. Software wuxuu baari doonaa Wi-Fi iyo dhamaan qalabka la isku xiro si loo ogaado dayacanka ama dadka aan fasaxnayn. Avast Internet Security sidoo kale waxaa ku jira qaababka ilaalinta ee ka dhanka ah ransomware, wuxuu leeyahay maamulaha sirta-dhisay iyo taageerto qalab si loo nadiifiyo browser.
Soo dejisan Avast Internet Security
Faallo ku saabsan Avast Internet Security
Avast Internet Security Xirfadaha la xiriira